Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Kwadebe maka ahịrị mgbe ị na -efepụ na London Heathrow
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Ọgba aghara Heathrow: Oke igwe mmadụ juputara n'ọdụ ụgbọ elu na -enweghị ọrụ
Ụfọdụ ndị njem Heathrow nọ na -akọ oge kwụ n'ahịrị na -enweghị isi n'ihi ụkọ ndị ọrụ Border Force nke mere ka ndị njem na -eche n'ahịrị ruo awa ise.
Ụkọ ọrụ na -eduga n'ahịrị dị ukwuu na Heathrow.
A manyere ndị njem ichere n'ahịrị ruo awa ise.
Igwe kwụ n'ahịrị nwere ihe egwu COVID-19 nye ọtụtụ puku ndị njem ụgbọ elu.
Ụkọ ọrụ ndị ọrụ nchekwa na ọdụ ụgbọ elu Heathrow nke London butere nnukwu ahịrị na enweghị ndọpụ mmekọrịta ọ bụla n'izu a, ebe ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ enweghị ike ịnagide ndị nọ na ókèala ahụ.
Ndị njem ụgbọelu na Ọdụ ụgbọ elu Heathrow enwetala ụdị ọnọdụ a ugboro ugboro kemgbe mmalite nke oria ojoo COVID-19, mana Fraịde a, ụfọdụ ndị Britain na-akọ oge kwụ n'ahịrị na-enweghị isi n'ihi ụkọ ndị ọrụ Border Force nke mere ka ndị njem na-eche n'ahịrị ruo awa ise.
Ọbụna otu onye njem kwuru na ọ tụbọrọ n'oge ọgba aghara.
Ọdụ ụgbọ elu Heathrow zara mkpesa site n'ikwu na ọ bụ maka igbu oge Forcekèala Ndị Agha na -eme “Nnyocha Ahụike Ahụike iji hụ na ndị njem na -erube isi nbanye gọọmentị UK ọhụrụ chọrọ.”
Ọdụ ụgbọ elu ahụ ekwughị enweghị ndọpụ mmekọrịta mmadụ na ogologo, kwụ n'ahịrị juru eju, agbanyeghị, nke butere puku kwuru puku ndị njem ụgbọ elu ihe egwu coronavirus.
N'ụtụtụ Satọde, ndị njem na Terminal 5 kọrọ na soshal midia na kwụ n'ahịrị nwụrụ.
Dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi mpaghara si kwuo, opekata mpe ihe omume asatọ ndị ọzọ nke ogologo ahịrị, igwe mmadụ juru, na enweghị ohere ịnweta mmiri na ụlọ ịsa ahụ ka edekọtara n'etiti Mee na Septemba.
Na Disemba 2020 - ụbọchị ole na ole tupu ekeresimesi - ọtụtụ narị ndị njem hapụrụ tọrọ atọ na ọdụ ụgbọ elu Heathrow ka ụgbọ elu juputara na ndị Britain na-anwa ịgbanahụ mmachi coronavirus Tier 4 nke ekwuputara n'oge na-adịbeghị anya, nke mere ka ezinụlọ nọrọ n'ụlọ ma zere ndị ha hụrụ n'anya n'oge ezumike.